खतरनाक रोगबाट जोगिन्छ, दैनिक एक कोसो केरा खानाले - ज्ञानविज्ञान
शरीरमा बढी भएको एसिडिटीलाई केराले तटस्थ बनाइदिन्छ । तापक्रम नियन्त्रण अन्य फलफूलको तुलनामा केरा निकै शान्त फल हो । दैनिक एक कोसो केरा सेवनले विभिन्न रोगबाट टाढा रहन सकिन्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, केराको नियमित सेवनले तपाईं निकै स्वस्थ हुन सक्नुहुनेछ ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी मन पराइने फलमध्ये केरा पनि एक हो । यो विश्वको जुनसुकै कुनामा पाइन्छ । केरा पोषक तत्वबाट भरपुर हुने भएकाले पनि यसलाई महत्वपूर्ण फल मानिन्छ । यसको मुल्य पनि धेरै उतारचढाव नहुने भएकाले सबै वर्गले यसको सहजै उपयोग गर्न सक्छन् । ब्लड प्रेसर रोक्नेदेखि लिएर दम र क्यान्सरजस्ता रोगलाई नियन्त्रण गर्न केरा महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै चम्किलो छाला र कपालका लागि पनि केरा लाभदायी नै छ ।
मुटुसम्बन्धी समस्यादेखि मासिक धर्मको अनियमितता, कब्जियत, छाती पोल्ने समस्या र शरीरका अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका लागि केराले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । केराको फाइदाका बारेमा अनसुन्धानकर्ताहरुले विभिन्न कुरा पत्ता लगाएका छन् । मुटु सम्बन्धी समस्याबाट मुक्त हरेक पटकको खाना तथा खाजाको समयमा एक कोसो केरा खाँदा शरीरलाई आवश्यक पोटासियम पर्याप्त प्राप्त हुने र यसले रगत जम्ने समस्याबाट मुक्ति हुने २१ प्रतिशत सम्भावना भएको बेलायती र इटालीका वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् ।
वैज्ञानिकहरुले विभिन्न अध्ययनका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । दैनिक १६ सय एमजी पोटासयुक्त खानेकुराले पाँच भागमा एक भाग स्ट्रोकको समस्या घट्छ । औसत केरामा करिब पाँच सय मिलिग्राम पोटासियम हुन्छ । पोटासियमको यस मात्राले रक्तचाप घटाउँछ र शरीरमा तरल पदार्थको सन्तुलनमा नियन्त्रण ल्याउँछ । हड्डी बलियो हामीले खाएको नुनिलोयुक्त पोषणबाट हुने खराब प्रभावसँग जुधेर हड्डी कमजोर हुनबाट बचाउन केरा एउटा महत्वपूर्ण फल मानिन्छ । केरा खाँदा महिलाको हड्डी बलियो हुने बताइएको छ ।
डिप्रेसनबाट मुक्त डिप्रेसनबाट पीडित बनेका अधिकांशले आफूलाई केरा खाएपछि धेरै राम्रो हुने गरेको बताएका थिए । यसको एउटै कारण छ, केरामा ट्राइपटोफान नामक एक प्रकारको प्रोटिन हुन्छ । त्यसलाई हाम्रो शरीरले सेरोटोनिनमा बदलिदिन्छ । सेरोटोनिनले हामीलाई खुसी बनाउने र मुड सुधार ल्याउँछ अनि डिप्रेसनबाट धेरै हदैसम्म मुक्ति दिलाउँछ । तसर्थ, केरा र खुसीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । महिनावारी नियमित गराउँछ मासिक धर्मअगाडि पेट दुख्ने र निराश हुने समस्याबाट आजित हुनुहुन्छ भने पिल्सको सट्टा एउटा कोसो केरा खानु उपयुक्त हुन्छ । केरामा हुने भिटामिन बी ६ ले रगत, ग्लुकोजको तहलाई नियन्त्रण गर्छ ।
तपाईंको मुड सकारात्मक बन्छ । रक्त अल्पत्ता उच्च आइरनयुक्त केराले शरीरमा हेमोग्लोबिनको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र एनेमियाको समस्याबाट मुक्त बनाउँछ । रक्तचापको समाधान उष्ण प्रदेशमा अत्यधिक पाइने केरामा पोटासको मात्र अत्यधिक भए पनि नुनको मात्रा भने न्यून हुन्छ । त्यसका कारण उच्च रक्तचापको समस्या समाधान गर्न सघाउँछ । अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासनले केरामा उच्च रक्तचाप र स्ट्रोकको समस्या घटाउने क्षमता हुने जनाएको छ । दिमाग तेजिलो केरा र दिमागी तेजबीच पनि अनौठो सम्बन्ध छ । नियमित केरा खानको मस्तिष्क तेज हुने विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले देखाएको छ । अमेरिकामा दुई सय जना स्कुले विद्यार्थीलाई ब्रेकफास्ट, ब्रेक र लन्चको समयमा नियमित केरा खुवाई उनीहरुको स्मरणशक्तिलाई सशक्त बनाइएको थियो । पोटासियमयुक्त केराले विद्यार्थीलाई धेरै सचेत गराएको अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।
कब्जियतको औषधि उच्च फाइबरयुक्त केराले कब्जियत रोगका लागि औषधि नै हो । मदिराको ह्याङओभर भएर हिँडडुल गर्न कठिनाइ भएको छ ? छ भने एक, दुई कोसा केराले नै तत्कल ह्याङओभर हटाइदिन्छ । केरासँग मह मिसाएर खाने बित्तिकै यसले पेटलाई आराम गरिदिन्छ । छाती दुखाइमा निको केरामा एन्टिएसिड तत्व हुन्छ । तसर्थ छाती मुटु पोल्ने समस्या छ भने तत्कालै राहत मिल्छ । मर्निङ सिकनेस रोक्छ गर्भवतीमा हुने वाकवाकी, वान्ता, चक्कर लाग्ने जस्ता मर्निङ सिकनेस रोक्न पनि केरा उपयुक्त हुन्छ । केराले रगतमा सुगरको तहलाई उच्च बनाइदिन्छ । लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न केराको बोक्राभित्रको गुदी शरीरमा दल्दा लामखुट्टले टोक्दैन । त्यस्तै सुन्निएको ठाउँमा केरा दल्दा पनि निको हुुने धेरैको विश्वास छ ।
शान्त बनाउँछ केरा भिटामिन बीयुक्त भएकाले यसले स्नायु प्रणालीलाई शान्त पार्न पनि सहयोग पु¥याउँछ । ब्लड सुगर नियन्त्रण इन्स्टिच्युट अफ साइकोलोजी इन अस्ट्रेलियाको अध्ययनअनुसार काममा हुने चापले चकलेट र चिप्सलगायतका फास्टफुडमा निर्भर हुने गर्छन् । पाँच हजार अस्पतालका बिरामीमा गरिएको अध्ययनमा अधिकांश मोटा बिरामी बढी तनाव हुने काममा आबद्ध हुने बताएका थिए । अध्ययनअनुसार हरेक दुई, दुई घन्टामा कार्बोहाइडे«डयुक्त खाना खाएर हाम्रो शरीरको ब्लड सुगरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र त्यसका लागि केरा पनि एउटा महत्वपूर्ण फल हो । अल्सरबाट बचाउँछ नरम र चिप्लो गुणका कारण कुनै पनि आन्द्रासँग सम्बन्धित असन्तुलनविरुद्ध केरालाई एउटा पोषणयुक्त खानाका रुपमा लिन सकिन्छ । यसले आमा हुन लागेकाहरुलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा शान्त बनाइदिन्छ । बच्चा जन्मिँदा मानसिक शान्ति होस् भनेर थाइल्यान्डमा गर्भवतीले नियमित केरा खाने गर्छन् ।
Topics #केरा #रोग
Don't Miss it के गर्नुहुन्छ तनाव कम गर्न ?
Up Next छठको व्रत नबस्दा राम्रो गर्भवती र बिरामीले
​यसरी थाहा पाउन सकिन्छ क्यान्सरको सुरुवाती लक्षण
स्तनमा परिवर्तन छातीको क्यान्सर महिलाको लागि सबैभन्दा बढी हुने र सताउनेमा पर्छ । विश्वमा धेरै महिला छातीको क्यान्सर भएर मर्ने…